ဆ…ဆရာမ – Grab Love Story
ဒီ ဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင်က ရဲလွန်း ။ ရဲလွန်းသည် ဆင်းရဲတွင်း နက်တဲ့ အခြေခံ လူတန်းစား မိသားစုထဲမှာ ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကောင်လေး တယောက် ။ အဖေက စက်ရုံတရုံက အလုပ်သမား ။ အမေက ဈေးရောင်းသည် ။ တဦးတည်းသော သား ငဆိုးလေး ။ ပိန်ပါးလို့ အရပ်မြင့်တယ်လို့ ပို ထင်ရသည် ။ ငယ်ငယ်ထဲက အစားထက် ကစားကို ပိုမက်နေခဲ့တာမို့ရယ်..မရှိဆင်းရဲသား နင်းပြား ဘ၀တွေမို့ မစားနိုင်တာရယ်ကြောင့် ရဲလွန်းသည် ပြားချပ်ချပ် ပိန်ကပ်ကပ်ကလေး ။ အသက်၁၉နှစ် ကောင်လေး ။ ဆံပင်က ရှည်သည် ။ လိန်ကောက်နေတဲ့ ဆံပင်နီကြောင်ကြောင်တွေက ပုခုံးအထိ ရှည်သည် ။ လက်ကြော မတင်းတဲ့ လူပျင်းကလေး ။ ရဲလွန်းသည် ကျောင်းလည်း မတက်ချင်..စာလည်း မကျက်ချင်. တအားဖျင်းတဲ့ လူဖျင်းကလေး လို့ သူ့ကျောင်းက ဆရာ ဆရာမတွေက ပြောတာ ခံရတဲ့ကောင် ။ ဖျင်းလည်းဖျင်း ပျင်းလည်းပျင်းတဲ့ ရဲလွန်းသည် ဆေးခြောက်တော့ ရှူတတ်သည် ။ ဆေးခြောက်ရှူပြီး ချောင်ကောင်းကောင်း တနေရာရာမှာ နှပ်နေချင်တာက သူ့အကျင့် ။ သူ့ဝါသနာ ။ သူက အဲလို နှပ်နေ အိပ်နေတာကို “ ယူတယ်…” လို့ သုံးနှုံးတတ်သည် ။ နေရာယူနေသည် ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် တဲ့ ။ သူ ၀ါသနာ ပါတာက မိန်းမ ။ မိန်းမ ၀ါသနာကြီး တဏှာက တအားကြီးတဲ့ နှာဘူးလေး ။ ရဲလွန်းသည် ငယ်ငယ်လေးထဲက အတန်းကျ ကျောင်းသားကြီးတွေရဲ့ လမ်းပြသင်ကြားပေးတာတွေကြောင့် မိန်းမနဲ့ ယောက်ျားလိင် ဆက်ဆံတာတွေကို သူ သိနေသည်.. နားလည်နေသည်။ ဓါတ်ပုံတွေ မြင်ဘူးသည် ။ မြန်မာ အပြာဇာတ်လမ်း စာအုပ်လေးတွေ ရော နိုင်ငံခြားက ရောင်စုံပုံစာအုပ်တွေကိုရော ကြည့်ဖူးသည် ။ ဒီ အတန်းကျ ကျောင်းသားကြီးတွေကြောင့်ဘဲ ရဲလွန်းသည် လက်နဲ့အာသာဖြေဖျောက်( ကွင်းတိုက် ) တတ်သွားတာ ဖြစ်သည် ။ ကွင်းတိုက်တတ်သွားတဲ့အခါ မိန်းမချောချောတွေကို မှန်းဆပြီး တနေ့ကို သုံးလေးခါထပ် မနည်း သူ ကွင်းတိုက်တော့တာဘဲ ။ ရဲလွန်းသည် အပြာစာအုပ်တွေထဲက မိန်းမ ၀တ်လစ်စလစ် ပုံတွေကို ကြည့်ရတာကို အားမ၇ဘူး ။ အပြင်မှာလည်း မိန်းမတွေရဲ့ ကိုယ်လုံးတီးကိုယ်တွေကို ကြည့်ချင်လာသည် ။ မိန်းမတွေ ရေချိုးတာကို သူ ချောင်းကြည့်တတ်လာသည် ။
သူမ စိတ်ထဲမှာ ရဲလွန်းသည် ရိုးအတဲ့ နွမ်းနွမ်းပါးပါး ဆင်းရဲသား ကျောင်းသားလေး တယောက် လို့ဘဲ ထင်မှတ် ခဲ့ပြီး အဒေါ်အရွယ် မိန်းမကြီး တယောက်ကို မှန်မှန်လေး စားသုံးနေတဲ့ တဏှာကြီးလွန်းတဲ့ လူလည်လေး တယောက် ဆိုတာ လုံးလုံး မရိပ်စားမိခဲ့ဘူး ။ဒေါ်မြမြနွယ်သည် သူ့ကို ကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက် ..အတန်းထဲမှာ ခုံပေါ်တက် ရပ်ခိုင်း ..နားရွက်ဆွဲပြီး ထိုင်ထလုပ်ခိုင်း..အမျိုးမျိုး ဒါဏ်ပေးတာလည်း အပြုံး မပျက်ဘဲ မနက် ဆိုရင် “ မင်္ဂလာပါ ဆရာမ ” ဆိုပြီး ပြေးလာ နုတ်ဆက်တတ်တဲ့ ရဲလွန်းကို သနားမိသည် ။ ပင်ကိုယ် စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့ ကောင်လေးဘဲ ဆိုပြီး သူ့ကို စာတော်လာအောင် လုပ်ပေးမည် လို့ စဉ်းစားနေသည် ။ သန်းဝေ ဆိုတဲ့ ရဲလွန်းရဲ့ အကြံပေးကြီးကတော့ ရဲလွန်းတယောက် ဒေါ်မြမြနွယ် အတန်းရှေ့မှာ စာသင်နေတဲ့ အချိန် ကျောက်သင်ပုံးမှာ မြေဖြူနဲ့ စာရေးနေတဲ့အခါ သေးကျဉ်တဲ့ ခါးလေးရဲ့ အောက်က စွင့်ကား လှပတဲ့ တင်ပါးကြီးတွေက တဆတ်ဆတ် တုန်ရင်နေတာကို ငေးမော ကြည့်ပြီး စိတ်တွေ ထကြွ နေတာကို အမြဲ တွေ့နေတော့ မုန့်စားဆင်းချိန်မှာ ရဲလွန်းကို ခေါ်ပြီး ခပ်တိုးတိုး နဲ့ “ ရဲလွန်း…မင်း ဆရာမကို လိုးဖို့ ကြံနေသလား..ငါ့လူ….” လို့ မေးသည် ။ ရဲလွန်းကလည်း သန်းဝေက သူ့ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ အကြံပေးကြီးမို့ ဘူးမကွယ်ဘဲ “ ကိုသန်းဝေရာ…ရမယ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ချင်တာပေါ့ဗျာ..ဒီလောက် ကောင်းတဲ့ ရေဆေးငါးကြီးဘဲ…” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်လေသည် ။ သန်းဝေလိုဘဲ အတန်းကျ ကျောင်းသားကြီး မင်းထိုက်ကလည်း ဆရာမ ဒေါ်မြမြနွယ်ကို ကြိတ်ပြီး သဘောကျနေသည် ။ မင်းထိုက်သည် ရဲလွန်းလိုဘဲ စာသင်ရတာကို စိတ် လုံးဝ မပါတဲ့အီးပေါလောကြီး ဖြစ်သည် ။ ဆရာဦးမြတ်စံ ဆိုတဲ့ ဆရာတယောက်က မင်းထိုက်သည် သုံးစားလို့ မရတဲ့ ခေါင်းထဲမှာ ချီးဘဲ ရှိတဲ့ကောင်လို့ ဒေါသတကြီး အော်ငေါက်ဘူးသည် ။ မင်းထိုက်သည် စာမသင်ချင်ဘဲ ရုပ်ရှင်မင်းသား လုပ်ချင်နေတဲ့ကောင်မို့ ဆရာဦးမြတ်စံ ဘယ်လောက်ဘဲ သင်ပေးပေး သူ့ခေါင်းထဲကို ဘာမှ မ၀င်ဘူး ။ မှတ်လဲ မမှတ်မိဘူး ။ မင်းထိုက်က ရဲလွန်းကို အတန်းထောင့်ကို ဆီဲ ခေါ်ပြီး…“ ဆရာမကို ငါ ကြိုက်နေတယ် ကောင်လေး..မင်းဖါသာ ရပ်ကွက်ထဲက ကြီးတော်ကြီးကို လိုးနေစမ်းပါကွာ..လောဘမကြီးပါနဲ့ ခွေးကောင်လေး”လို့ ကြိမ်းထားသည် ။ ရဲလွန်းကတော့ မင်းထိုက်ကို လူပေါကြီး တကောင်လို့ဘဲ မှတ်ယူထား ပုံရသည် ။ စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ဂရုကို မစိုက်ဘူး ။ ဒေါ်မြမြနွယ်သည် သူ့ယောက်ျား ရှိနေတုံးက သူ့ယောက်ျားရဲ့ ရုံးကားလေးနဲ့ ကျောင်းကို လာတတ်ပေမယ့် သူ့ယောက်ျားလည်း မရှိတော့တဲ့အခါ ဘတ်စ်ကားနဲ့ဘဲ ကျောင်းကို လာ ကျောင်းက ပြန်သည် ။ ဆရာမရဲ့ အိမ်သည် ကျောင်းနဲ့ သိပ် မဝေးလှဘူး ။ ဒီနေ့ ရဲလွန်းကို ဆရာမက ခေါ်ပြီး..“ ရဲလွန်း..မင်း မိဘတွေကို ဆရာမ ပြောခိုင်းတာ ပြောခဲ့ပြီးပြီလား….” လို့ မေးသည် ။
“ ရဲလွန်း…..ဘာငေးနေတာလဲ..မင်းကလဲ ဆရာမ စာသင်ပေးနေတာကို စိတ် လုံးလုံး မ၀င်စားဘူးကွယ်…..ဟင်း…မင်း နဲ့တော့ ခက်တော့တာဘဲကွယ်……” ဆရာမ က ရဲလွန်း တယောက် စာထဲကို စိတ်မ၀င်စားတာကို တွေ့ရလို့ စိတ်ပျက်သွားသည် ။ “ အင်း….ဒီအတိုင်းဆိုရင် မင်းကို ဆရာမ အိမ်ကို ခေါ်ပြီး စာသင်လည်း မင်း စိတ်မပါရင် ဘာမှ အကျိုး ရှိမှာ မဟုတ်ဘူးကွာ….မင်း မသင်ချင်ရင်လည်း ဆရာမ တခြား သင်ချင်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ဦးစားပေး သင်ပေးလိုက်ရမလား….” ဒီလို ဆရာမ ပြောလိုက်တော့လည်း ရဲလွန်း ကြောက်သွားသည် ။ ဆရာမနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ် မနေရမှာကို ကြောက်သည် ။ ဆရာမ အိမ်ကို လိုက်ခဲ့ရလို့ ဆရာမ ရေချိုးနေတာကို နီးကက် တုံးလုံးကြီး တွေ့လိုက်ရတယ် မဟုတ်လား ။ “ ကျ..ကျနော်….ကြိုးစားပါမယ် ဆရာမ….ကျနော့်ကို သင်ပေးပါ….” “ အေးလေ….မင်း ကြိုးစားမယ် ဆိုရင်လည်း ဆရာမက သင်ပေးချင်ပါတယ်..ရဲလွန်းရယ်…..” ဆရာမရဲ့ လည်ဟိုက် ဘလောက်စ် အင်္ကျီထဲက လှုပ်တုပ်တုပ် ရင်သားလုံးကြီးတွေကို မသိမသာ ခိုးကြည့်နေရတာကိုက ရဲလွန်း အတွက် ဖီလင်ပါ ။ ဆရာမရဲ့ မိမွေးတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံး ကိုယ်တွေကိုပြန် မြင်ယောင်နေမိပြီး သူ့လိင်တန်က တန်းတန်းမတ်မတ် ထောင်နေသည် ။ ဆရာမကို ဒေါ်ထားထားညွန့်ကြီးကို တွယ်သလို တွယ်ချင်နေတာတော့ အရမ်းပေါ့ ။ ဆရာမ အိမ်က အပြန်မှာ သူတို့ ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးခြောက်ရောင်းတဲ့ မွတ်တားဘိုင် ဆီက ဆေးခြောက်ထုပ် အကြွေး ၀င်ဝယ်ပြီး အိမ်ကို ပြန်လာခဲ့သည် ။ အိမ်မှာ အဖေရော အမေရော မရှိကြဘူး ။ တဖက်အိမ်က ဒေါ်ထားထားညွန့် ရှိနေလား ဆိုတာကို လေ့လာလိုက်သည် ။ စော်ကြီး ရှိနေရင် နည်းနည်း ပွတ်သီးပွတ်သပ် သွား လုပ်လိုက်ပြီး တက်ဖြုတ်မလို့ ။ အိမ်အနောက်ဖက်ကနေ ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အိမ်ထဲကို သူ ခြေသံမကြားအောင် ခြေဖေါ့နင်းပြီး တံခါးကို အသာလေး တွန်းဖွင့်ပြီး ၀င်လိုက်သည် ။ ခါတိုင်းလည်း သူ ဒီလိုဘဲ ၀င်နေကျမို့ ။ အိမ်ထဲကို ရောက်ပြီး စော်ကြီး ရဲ့ အိပ်ခန်းလေးဆီကို သူ လှမ်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အိပ်ခန်းထဲက အသံဗလံတွေကြောင့် ရဲလွန်း ခြေလှမ်းတွေ တန့်သွားသည် ။ “ အိုး…အိုး……အား…အား…အား…….အားရှီး…..ရှူး….အား………” ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အော်ညည်းသံတွေ နဲ့ အသားချင်း ၇ိုက်ခတ်တဲ့ အသံတွေ…ဖပ်ဖပ်ဖပ်..ဖပ်ဖပ်ဖပ်…….တနည်းအားဖြင့် ကုတင်သံ လို့ ခေါ်ကြတဲ့ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမတို့ ကာမစပ်ယှက်ကြတဲ့အသံဗလံတွေ …။ ဟာ..စော်ကြီး တယောက်ယောက်နဲ့ လိုးနေတယ်…….ဘယ်…ဘယ်…ဘယ်သူများပါလိမ့်……..။ ရဲလွန်း တအား သိချင်သွားသည် ။ ခြေဖျားထောက်ပြီး ဒေါ်ထားထားညွန့်ရဲ့ အိပ်ခန်းလေး အနားကို ချဉ်းကပ်သွားပြီး အထဲကို မြင်နိုင်ဖို့ ချောင်းကြည့်စရာ အပေါက် ရှာလိုက်သည် ။ ဟောင်းနွမ်း စုတ်ခြာနေတဲ့ သုံးထပ်သား ထရံလေးမှာ သံပေါက်ရာ အဟောင်းတွေ အများကြီး ရှိနေသည် ။ ရဲလွန်း အထဲကို ချောင်းကြည့်လိုက်သည် ။
ပွတ်…ပွတ်..ပွတ်…အိုး……အိုး…….အား…….အား……..လက်ချောင်းတွေက အင်္ဂါစပ်ထဲကို ကျွံဝင်သွားကြသည် ။ အင်း……..အ…….အ………..အ…….။ အစိကို လက်ချောင်း နှစ်ချောင်းပူးနဲ့ ချေရင်း အရည်တွေ စိုစိုရွှဲလို့ ဒေါ်မြမြနွယ် တယောက် ကာမအထွဋ်အထိပ် ကို ရောက်ရှိသွားရသည် ။ မနက်စောစော ။ ကျောင်းရဲ့ အနောက်ဖက်က ကုက္ကိုပင်ကြီးရဲ့ အကွယ်မှာ သန်းဝေ စီးကရက် သောက်နေသည် ။ ကျောင်းစောင့်ကြီး ဦးစိန်လုံး တွေ့သွားရင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကို သွားတိုင်တတ်လို့ သူမတွေ့အောင် သစ်ပင်ကွယ်ပြီး သောက်နေတာ ဖြစ်သည် ။ သန်းဝေသည် သူ နေထိုင်ကြီးပြင်းလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် သူ့မှာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စရိုက်တွေ ရှိနေသည် လို့ မင်းထိုက်က တခါက ပြောဘူးသည် ။ သန်းဝေက ဒါကို ပြန်ကြားတော့ မင်းထိုက်ကို မိုးမွှန်နေအောင် ဆဲသည် ။ သန်းဝေနဲ့ မင်းထိုက်တို့ အကြာကြီး စကား မပြောကြတော့ ။ နောက်ပိုင်းမှာ မင်းထိုက်က ဆေးခြောက် လိုချင်သလို အပြာစာအုပ်လည်း ဖတ်ချင်တော့ သန်းဝေကို ပြန်ပြီး ချော့သည် ။ သန်းဝေကလည်း ရိုင်းစိုင်း ပေမယ့် သဘောကောင်းသည် ။ အပေါင်းအသင်း ခင်သည် ။ မင်းထိုက်နဲ့ ပြန်ဆက်ဆံသည် ။ “ ဟေ့..သန်းဝေ…..” ရုတ်တရက် မင်းထိုက် ခေါ်လိုက်လို့ သန်းဝေ လန့်သွားသည် ။ “ မင်းမေစပ်ပတ်…” “ သန်းဝေ..မင်းကို အရေးတကြီး ပြောပြစရာ ရှိလို့ကွ….” “ ဟေ..ဘာဖြစ်လဲ..မင်းဖင်ကို ညက တယောက်ယောက် တက်ဖွင့်သွားလား….” “ ဟာ…မင်း မမိုက်ရိုင်းနဲ့ကွာ….မင်းကို ခင်လို့ ပြောပြမိလို့..မင်း နားမထောင်ချင်ရင်လည်း ရတယ်…မပြောတော့ဘူး….” “ ဟာ..မင်းထိုက်..အဲလို မလုပ်နဲ့ကွာ..ငါက နောက်တာပါ…..” သန်းဝေက စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ပြောလိုက်ရင်း စီးကရက်ကို တအား ရှိုက်လိုက်သည် ။ မင်းထိုက်က စီးကရက် တလိပ် တောင်းသောက်ရင်း “ ညက ဆရာမအိမ်ကို ငါ စာသင်ဖို့ လိုက်သွားတယ်ကွ…” လို့ စပြောလိုက်သည် ။ သန်းဝေက “ ကြွားမနေနဲ့ကွာ…ငါ သိတယ်….မင်းက စောက်ကြောက်….မင်း ဆရာမ အနံ့ကို ရှူနေရတာနဲ့ဘဲ ကျေနပ်နေတာ မဟုတ်လား….” လို့ မဲ့ရွဲ့ပြီး ပြောလိုက်သည် ။ မင်းထိုက်က “ သန်းဝေ …ငါ အရေးကြီးတဲ့ သတင်း ပြောမလို့ ..ခဏ ပါးစပ်ပေါက်ကို ဆို့ထားကွာ….” လို့ မျက်နှာထား တင်းတင်းနဲ့ ပြောလိုက်သည် ။ သန်းဝေလည်း မင်းထိုက် ပြောပြတဲ့ ဆရာမက ရဲလွန်းဆီ သိမ်းသွားတဲ့ နှာစာအုပ်ကို ဖတ်နေတယ် ဆိုတာကို သိလိုက်ရတော့ မျက်လုံးကြီး ပြူးသွားသည် ။ ဒီစာအုပ်သည် သူ ယူလာတဲ့ စာအုပ် ဖြစ်သည် ။ ဒီနေ့တောင် တအုပ် ယူလာသေးသည် ။ ဒီနေ့ ယူလာတဲ့စာအုပ်က ပုံတွေပါ ပါလို့ ရဲလွန်းတို့ကို ပြမလို့ ယူခဲ့တာ ။ “ ဟာ..ဒါဆို ဆရာမက ဒီဟာတွေကို စိတ်ဝင်စားနေတာဘဲကွ…..ငါ ထင်တာ မှန်နေပြီ..သူ့ဘဲကြီး ပြန်မလာတော့လို့ဆရာမ နှာစိတ်တွေ ကြွနေပြီ ဆိုတာ သေချာပြီဟေ့….” မင်းထိုက်က “ ဟုတ်တယ်..ငါလည်း ထင်တယ်…မနေ့ညက အဲ့စာအုပ် ဖတ်ပြီးတဲ့ အချိန် …ဆရာမရဲ့ နှာတန်ဖျားတွေနဲ့ ပါးတွေ နီရဲနေတယ်….ငါလည်း ဆရာမရဲ့ အိမ်သာထဲ ကွင်းတချီ ထုခဲ့တယ်…..” “ ဘာ….စောက်ရူး….ဘာလုပ်တာလဲ..မင်းကလဲ..စောက်ပေါ မင်းထိုက်……” သန်းဝေ ဆဲတာတွေကို မင်းထိုက်က သွားဖြီးပြီး ခံနေသည် ။
ကျောင်းခေါင်းလောင်းသံကြောင့် သန်းဝေနဲ့ မင်းထိုက်တို့ သစ်ပင်ကွယ်ကနေ ထွက်လာကြသည် ။ ကျောင်းဆီကို လျောက်သွားကြတဲ့ အချိန် ရဲလွန်း လာနေတာ တွေ့ကြရလို့ သူ့ကို ရပ်စောင့်ကြသည် ။ ရဲလွန်းက မျက်နှာ ပျက်နေသည် ။ သန်းဝေက “ ဟေ့ကောင်…ရဲလွန်း….ဘာဖြစ်နေလဲ မင့်စောက်ခွက်က..မင်း ဖင်ကို သူများ တက်ချသွားလား…” လို့ ပြောလိုက်တော့ ရဲလွန်းက “ လီးဘဲ သန်းဝေ…….မင်းဖင်ကို မင်းပြန်လိုးလိုက်..စောက်ပတ်….” လို့ ဆဲလိုက်ပြီးကျောင်းထဲကို မ၀င်သေးဘဲ ဘော်လုံးကွင်းဖက်ကို ချော်ထွက်သွားလို့ သန်းဝေက လိုက်ခေါ်သည် ။ ရဲလွန်းက “ သန်းဝေ..မင်း ဘာကြောင့် မင်းထိုက်နဲ့ ပေါင်းတာလဲ..ဒီကောင်က သစ္စာဖေါက်..ထွတ်..မနေ့ညက သူ ဆရာမအိမ်ကို ပါသွားတယ်ကွ..မင်း မေ့နေလား….” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ သန်းဝေကလည်း “ ရဲလွန်း..မင်း မနာလို ဖြစ်မနေနဲ့..သူ့ဆီက သတင်းထူးတခု ရလိုက်တယ်ကွ..မင်းဆီက သိမ်းသွားတဲ့ နှာစာအုပ်ကို ဆရာမ ဖတ်နေ တာ သူ တွေ့တယ် တဲ့…..”လို့ ပြန်ပြောလိုက်သည် ။ “ ဟင်…..ဆရာမ….ဖတ်တယ်…ဟုတ်လား……” ရဲလွန်း အံ့အားသင့်သွားသည် ။ “ ဟေ့ကောင်လေးတွေ..ကျောင်းထဲဝင်လေ…..” ကျောင်းစောင့်ကြီး ဦးစိန်လုံး ရဲ့ အသံသြသြကြီးကို ကြားလိုက်ရသည် ။ ဆရာဆရာမများ နားနေခန်း အနက်အောက်ခံမှာ အဖြူရောင် ထွင်းစာလုံးတွေနဲ့ ရေးထားတဲ့ ပလပ်စတစ်ဆိုင်းဘုတ်လေး ရှိနေတဲ့ အခန်းလေးထဲကို ရဲလွန်း မရဲတရဲနဲ့ ၀င်လိုက်သည် ။ အတန်းခေါင်းဆောင် စိုးနိုင် လာပြောလို့ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်က သူ့ကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည် ဆိုလို့ ဆရာမ ရှိနေတဲ့ ဆရာဆရာမများ နားနေခန်း ကို သူ လာခဲ့တာ ။ စိတ်ထဲမှာ ပူနေတာက နှာစာအုပ် ကိစ္စကို ဆရာမက ကျောင်းအုပ်ကြီးကို တိုင်လိုက်ပြီလား လို့ ။ အထဲမှာ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ် ထိုင်နေတာကို တွေ့လိုက်ရသည် ။ တခြား ဆရာ ဆရာမတွေ ဘယ်သူမှ မရှိနေဘူး ။ “ ရဲလွန်း…လာ…လာ….ဒီကို…..” ဆရာမက လှမ်းခေါ်သည် ။ “ ရဲလွန်း….” “ ဗျာ…ဆရာမ….” “ မင်း ဒီစာအုပ် ဘယ်က ရလဲ…ဒါ ဘယ်သူ့စာအုပ်လဲ…” “ ဟို..ဟို……” “ ညာဖို့ စဉ်းစားမနေနဲ့ ရဲလွန်း….အမှန်အတိုင်း ဖြေကွာ…..” “ ကျ..ကျနော်….သန်းဝေ ဆီက ရတာပါ…” “ သေချာလား…” “ ဟုတ်….ဆရာမ…..” “ မင်း ဒါမျိုးတွေ ဖတ်တယ်ပေါ့လေ..စာတော့ မကျက်ချင်ဘူး….မင်း တော်တော် ဆိုးတဲ့ကောင်…” ရဲလွန်းလည်း ခေါင်းကြီး ငုံ့ပြီး ငြိမ်နေသည် ။ “ နောက်ကို ကျောင်းကို ယူမလာနဲ့..ဖတ်လည်း မဖတ်နဲ့….ကြားလား….” “ ဟုတ်…” “ ကဲ သွားတော့..မင်း သန်းဝေကို လွှတ်လိုက်..ဆရာမ တွေ့ချင်တယ် လို့ ပြောလိုက်…” “ ဟုတ်…..” “ ဟာ…..မင်း…မင်း..ဆရာမကို ဘာတွေ သွား ချွန်လိုက်လဲ ရဲလွန်း…….မင်းမေစပ်ပတ်…လီးဘဲ..လီးဘဲ…….ငါက ဘာလို့ ဆရာမဆီ သွားရမှာလဲ……” “ ငါ မချွန်ပါဘူး….နှာ စာအုပ် မင်းဆီက ယူဖတ်တာ လို့ ဘဲ ပြောလိုက်တာပါ……” “ ဟာ..မင်းကလည်း..ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံတာ မဟုတ်ဖူး..ငါ့နံမည်ကို ပြောလိုက်ရသေးတယ်ကွာ..ခက်တာဘဲ…….” သန်းဝေက ရှည်လျားတဲ့ သူ့ဆံပင် နီကြောင်ကြောင်တွေကို တဗျင်းဗျင်ူ ကုတ်ရင်း ပြောလိုက်သည် ။
သန်းဝေ ဆရာမဆီကို သွားလိုက်သည် ။ ဆရာမတွေ နားနေတဲ့ ရုံးခန်းလေးထဲမှာ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ် တယောက်ထဲ ရှိနေသည် ။ “ ဆရာမ..ခေါ်တယ် ဆိုလို့……” သန်းဝေက ဆရာမကို မကြည့်ဘဲ ခေါင်းငုံ့ထားရင်း ပြောလိုက်သည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်က “ သန်းဝေ..မင်းက ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ရဲလွန်းလို ကျောင်းသားကို ညစ်ညမ်းတဲ့ အပြာစာအုပ်တွေ ပေးဖတ်နေတယ်ကွာ..မင်း ဘာလို့ ဒီလို ကျောင်းသားအရွယ်တွေ မဖတ် သင့်တဲ့ အပြာစာအုပ်တွေကို ကျောင်းကို ယူလာတာလဲ…..မင်း ဒီနေ့ကော နောက်ထပ် စာအုပ် ပါလာသေးလား….” လို့ မေးလိုက်သည် ။ သန်းဝေလည်း မင်းထိုက် ပြောချက် အရ ဆရာမက သူ့အပြာစာအုပ်ကို ဖတ်သည် ဆိုတာကို သိထားတော့ “ ပါတယ် ဆရာမ တအုပ်ထဲပါ…..” လို့ ဖြေလိုက်သည် ။ “ ဟေ..ဟုတ်လား..သွား..အတန်းကို ပြန်ပြီး အဲဒီစာအုပ်ကို သွားယူလိုက်စမ်း……” “ ဘာ…ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆရာမ..စာအုပ်ကို သိမ်းလိုက်မလို့လား…..မလုပ်ပါနဲ့ ဆရာမ ရယ်..ကျနော်က ငှားဖတ်တာပါ….ပြန်မအပ်နိုင်ရင် လျော်ကြေး ပေးရမှာ…..” “ ဟဲ့..သန်းဝေ…. ကောင်စုတ်..ကျောင်းခန်းထဲမှာ ဒီလို စာအုပ် မရှိသင့်ဖူးဟဲ့…သွားယူဆို ယူလိုက်…..” ဒေါ်မြမြနွယ် အော်လိုက်လို့ သန်းဝေ လန့်သွားသည် ။ ကျောင်းအုပ်ကြီး ဆီကို ပို့ရင် မလွယ်ဘူး ။ မိဘတွေ ခေါ်ပြီး ဆုံးမတာတွေ ဖြစ်နိုင်သည် ။ “ ဟုတ်ကဲ့ ဆရာမ…..” အတန်းကို ပြန်ပြီး လွယ်အိတ်ထဲက အပြာစာအုပ်လေးကို ဘလာစာအုပ်ကြားထဲ ညှပ်ပြီး ဆရာမများ နားနေခန်းကို ပြန်သွားလိုက်ရသည် ။ အတန်းထဲမှာ သူ့ကို ၇ဲလွန်းနဲ့ မင်းထိုက်က “ ဘာဖြစ်လဲ… ဘာဖြစ်လဲ…” လို့ လိုက်မေးသေးသည် ။ ဆရာ နားနေခန်းထဲမှာ ဆရာမ တယောက်ထဲ မဟုတ်တော့ဘူး ။ ဆရာဦးကြွယ်သိန်း ပါ ရောက်နေသည် ။ ဦးကြွယ်သိန်းက ဆရာမဒေါ်မြညမနွယ် နဲ့ မနီးမဝေးမှာ ထိုင်ပြီး စာအုပ်တအုပ် ကို ဖတ်နေ သည် ။ သန်းဝေက စညအုပ်ကို ဆရာမရဲ့ စားပွဲပေါ်ကို ချပေးလိုက်တော့ ဆရာမက “ ဟုတ်ပြီ..သန်းဝေ…မင်း အတန်းကို ပြန်တော့ ” လို့ ပြောလိုက်သည် ။ ဗလာစာအုပ်ကိုလည်း ခြင်းတောင်းထဲကို ထည့်လိုက်သည် ။ ဦးကြွယ်သိန်းက မော့ကြည့်ပြီး “ သန်းဝေ..သန်းဝေ…..မင်း အတွက်တော့ ငါ ရင်လေးသေးတယ်..ဆရာတွေရဲ့ ပြောစကားကိုလည်း နားမထောင်ဘူး..” လို့ ညည်းလိုက်သည် ။ ဆရာမဒေါ်မြမြနွယ်က “ ဆရာ..သူ ဘာတွေ လုပ်သလဲ…ကျမကိုလည်း ပြောပြပါအုံး…” လို့ မေးလိုက်သည် ။ ဦးကြွယ်သိန်းက “ ဟာ..ဆရာမရယ်..ဒီကောင် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်.. ဆေးခြောက်၇ှူ တယ် ဗျ….ဟိုတနေ့ကလည်း ဘူကြီး ဆိုတဲ့ ကောင်နဲ့ ဘော်လုံးကွင်းထဲမှာ ထိုးကြရိုက်ကြတယ်…..” လို့ ပြောလိုက်သံကို သန်းဝေ ကြားလိုက်ရပေမယ့် တကျိုးထဲ လစ်ပြီ ။